Thwin Fri May 24, 11:58:00 AM GMT+8
အဲလို အကောင်းမြင် ပေးနိုင်ရင်..တစ်ကယ်ကို အလှပဆုံးသော လောကကြီးတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်မယ်ထင်တယ်နော်..။ နောင်တရစရာတွေ၊ အမှားတွေကို မမြင်အောင် ကွယ်ရင်း၊ ပစ်ရင်းပေါ့...။
Anonymous Fri May 24, 07:58:00 PM GMT+8
good post sis chit..
Anonymous Fri May 24, 08:22:00 PM GMT+8
မိုးနတ်ကြယ်စင် Fri May 24, 11:02:00 PM GMT+8
မိုးဇက် Sat May 25, 07:50:00 PM GMT+8
အဲ့အသိ ငမျိုးကအရင်သိပြီးများ စံပယ်တင်မှဲ့ လေးကို ယူလိုက်လေသလား ???
အန်တီလေးမေခင် Mon May 27, 02:00:00 PM GMT+8
လူတွေကိုလည်း မကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေ ကွက်ပြီး လွှင့်ပစ်လို့ရရင် ကျုပ်က လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်ပါသေးရဲ့။ ကောင်းတာလေးတွေပဲ ရွေးပြီး ချစ်ကြတာပေါ့ဗျာ နော်။အားပေးဖတ်ရှု.သွားပါတယ်။
တန်ခူး Wed May 29, 12:00:00 AM GMT+8
ငမျိုးလိုသူငယ်ချင်းမျိုးရှိတယ် မ ရေ. ဒါပေမယ့်သူကလည်တယ်. ခုထိတကိုယ်တည်း လူပြိုကြီး
စံပယျဖွူ Wed May 29, 08:05:00 PM GMT+8
လာဖတ်သွားပါတယ် အမ။ ပညာသားပါတဲ့ ၀တ္ထုကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပဲ။
မြသွေးနီ Thu May 30, 05:44:00 PM GMT+8